Talo, taageero iyo taakuleyn qaxootiga iyo muhaajiriinta
Waxaan ku siineynaa talo bixin Arbaco kasta 10ka subaxnimo Ballan kaliya.
Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad na soo booqato:
Haddii aad qabto cudur maskaxda ah ama aadan hubin arrintan.
Markaad isku aragto culeys maskaxeed iyo dhibaatooyin.
Markaad la kulanto naxdin.
Marka aadan fiicnayn. Markaad dareento dareen / fikir aan raaxo lahayn.
Haddii aad leedahay garasho (maskaxeed) ama naafonimo jireed ama naafonimo xagga waxbarashada ah.
Waxa kugu adkaan karta inaad waxbarto oo aadan aqoon sababta.
Haddii aadan hubin inaad leedahay naafonimo / naafonimo.
Markaad dhibaatooyin culus la kulanto oo aad ku sugan tahay xaalad adag oo aanad garanayn caawimaadda aad heli karto.
Waxaan kuu sameyn karnaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan kuu sheegi doonaa ikhtiyaarrada iyo caawimaadda la heli karo waxaanan kaa taageeri doonaa helitaanka caawimaaddan.
Adiga oo kula jira, waxaan sameyn doonnaa noocyo badan oo codsiyo muhiim u ah xaaladdaada.
Waxaan kaa caawinaa dhibaatooyinka mas'uuliyiinta / xafiisyada iyo hay'adaha kale.
Waxaan kaa taageereynaa isku dhacyada iyo dhibaatooyinka nooc kasta leh.
Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho oo aad dalbato dhakhaatiir ku habboon, rugo caafimaad iyo daaweynno iyo taageero kale oo adiga kuu gaar ah.
Waxaan kuu raaceynaa ballamo takhaatiir, daaweyn, mas'uuliyiin / xafiisyo iyo ballamo kale.
Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho guri dabaq ah.
Waxaan kaa taageeraynaa shaqo raadintaada iyo raadinta tababarka waxaanan ku siinaynaa talo.
Waxaan kuu gudbin doonaa xafiisyada kale ee ku takhasusay mushkilad gaar ah / walaac adiga kugu saabsan. Waxaan sidoo kale kugu raaci karnaa halkaas haddii aad rabto.
Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa nolol maalmeedka. Tusaale ahaan, waxaan imaan karnaa gurigaaga oo aan wax karineynaa oo isla sheekaysan karnaa. Waxaan kaa caawin karnaa inaad barato Jarmalka. Waxaan ku wada socon karnaa socod iyo waxyaabo kale. Haddii dhibaato kaa haysato dukaameysiga kaligiis oo aadan ka bixi karin guriga, annagana waan ku caawin doonnaa. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan raadino fursado madadaalo oo ku habboon oo aad ku raaxeysan karto.
Inta lagu jiro wada-tashiga waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan waxa aan bixinno ka dibna waxaan ka fiirsan doonnaa sida ugu wanaagsan ee laguu taageeri karo.
Waxaa naga go'an inaan xal u helno dhibaatadaada, xitaa haddii ay adag tahay.
Haddii aadan noo imaan karin, waxaan imaan karnaa gurigaaga.
Haddii aad u baahan tahay turjubaan talo, fadlan horay noo sii ogeysii. Waxaad sidoo kale soo kaxaysan kartaa dad kuula turjumaya hadaad rabto. Ehelka / asxaabta sidoo kale waa lagu soo dhaweynayaa inay yimaadaan.
Markaad ogtahay dadka u baahan taageerkeena oo aan kaligood noo soo jeesan karin ama leh dhibaatooyin xagga luqadda ah. Kadib waa lagusoo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto. Kadib waxaan raadineynaa xalka.
Fadlan nala soo xiriir ballamaha ama haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid: Mail: b.winkelmeier@wisawi-ev.de, Telefoon: +49 (0) 61197142199 ama Mobile: +49 160 5729954